> Resource> tọghata> Olee otú iji Record YouTube on Mac
Mgbe na-ekiri vidiyo na YouTube.com, bụ n'ebe ọ bụla ohere na ị chọrọ ịzọpụta ya na gị na Mac kọmputa ma ọ bụ na-obere ngwaọrụ? Na otú ahụ, ị na-ekiri vidio offline n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla. Ma mgbe ị na-amalite na-achọ ezi usoro ime na, i nwere ike inwe emechu ihu. Ị nwere ike ịchọta nke ukwuu na-abaghị uru ọmụma nke dị a n'efu nke oge na ume. Ugbu a, biko anya dịghị ihe ọzọ ebe ọ bụ na ị bụ ebe a ebe ị pụrụ ịchọta a mma, viable ụzọ inyere ndekọ YouTube maka Mac- Wondershare AllMyTube (AllMyTube for Mac). Nke a YouTube edekọ maka Mac bụ mfe iji rụọ ọrụ na ngwa ngwa ka ịdekọ. Ọ pụkwara inyere tọghata dere videos.
Biko download usoro ihe omume mbụ na-enweta ya arụnyere. Mepee usoro mgbe nwụnye. Ị ga-ahụ ihe omume bụ naanị haziri ma i nwere ike inwe ya na-arụ ọrụ na a nkeji. Zuru ezu nkuzi na-atụ n'okpuru.
1 Gaa YouTube.com na-ahụ videos-amasị gị
Ẹkedori nchọgharị gị (Safari, Firefox ma ọ bụ Chrome) na-aga YouTube.com. Chọọ maka video-amasị gị na-emeghe ya na-egwu.
Mgbe video amalite loading, ị nwere ike na-atụ uche Download button n'elu nri nke video ihuenyo. Pịa ya na họrọ mkpebi ị chọrọ ma ọ bụrụ na o nwere nhọrọ dịgasị iche iche. Mgbe ahụ usoro ihe omume amalite Ndekọ YouTube video.
Cheta na: Ọ bụrụ na ndị video bụ nke a YouTube playlist, ị pụkwara ịhụ a Playlist nhọrọ Mgbe ị pịa Download bọtịnụ. Na otú ahụ, ị ​​nwere ike ibudata dum playlist na a click.
I nwekwara ike iṅomi URL nke video na-aga ka usoro ihe omume na-pịa Paste Url bọtịnụ. Ihe bụ ihe ọzọ kpọmkwem bụ ịdọrọ url na dobe ka usoro ihe omume.
Cheta na: Ọ bụrụ na ndị video ị download bụ nke a playlist ma ọ bụ a ọwa, i nwere ike imeghe dum playlist ma ọ bụ ọwa ịchọta a Download All bọtịnụ na n'elu nke video ndepụta. Pịa Download All button, na usoro ihe omume ga-amalite idekọ dum ụyọkọ nke videos ozugbo.
3 tọghata dere YouTube (nhọrọ)
The YouTube edekọ maka Mac na-enyere gị iji tọghata videos ka fọrọ nke nta niile nkịtị formats. Dị nnọọ pịa tọghata bọtịnụ na ekpe nke video na ebudatara n'ọbá akwụkwọ ma họrọ gị họọrọ mmepụta format si ndọpụta menu ma họrọ "Meghee ndekọ mgbe usoro na dechara" ma ọ bụ "mbupụ converted faịlụ ka iTunes ma ọ bụrụ na o kwere omume" nke mere na ị pụrụ ịchọta converted faịlụ ngwa ngwa ma nyefee gị obere ngwaọrụ.
I nwekwara ike-egwu dere videos na inbuilt ọkpụkpọ na kwa jikwaa video faịlụ na kọmputa gị site na importing ha ka ha usoro ihe omume. Na okwu, ọ bụ nnọọ a dum ngwugwu na olileanya-enyere gị aka idekọ YouTube, tọghata fọrọ nke nta niile ọzọ na-ahụkarị formats ma jikwaa kọmputa gị video faịlụ.
iDVD MP4: Olee otú iji tọghata MP4 ka iDVD ma ọ bụ DVD na Mac (Yosemite gụnyere)
Olee otú iji tọghata na Ọkụ YouTube ka DVD na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)